Iibhiskiti zeCrispy (Cracker)
Le bhiskithi iqhekezayo, okanye umqhekezi, yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu kule minyaka ngexabiso elinokhuphiswano, elilungele ukutshintshwa kwesidlo sakusasa, ixesha lekhefu leofisi, inkampu, izihlobo ezihlanganayo.
Umgubo wengqolowa, Iswekile eyenziwe ngetyuwa, Ioyile ecocekileyo yemifuno, Itswele, ityuwa, Isilayidi seChive, Iprotein yemifuno eneHydrolyzed, iZongezo zokutya (iSodium glutamate, iCalcium carbonate, Ammonium bicarbonate, Isodium bicarbonate, Disodium dihydrogen Pyrophosphate, Sodium Stearyl lactic acid, Sodium Metabisulfite, ), Intsingiselo edliwayo.
Incasa: Ubisi oluswiti / i-anyanisi enetyuwa / Ijusi ebomvu / isesame emnyama
Ingcaciso: 200g * 40 iingxowa / CTNs
Package: Iingxowa zangaphakathi, iibhokisi zangaphandle. (Zijikeleze iibhokisi ezingama-500 nge-20 GP container.)
Isatifikethi: HACCP, ISO9001, ISO45001, ISO22000
Iimpawu bhisikidi crispy
1.Iincasa ezine, ezinye iindlela
Uyilo lwepakethe ye-2.Simple, entle ngakumbi
Maleko ezimbini ukupakisha zeplastiki.
Egqithileyo Iibhiskithi zesidlo sakusasa
Okulandelayo: Iibhiskithi ezijikelezayo zemifuno
Ukutya amandongomane anetyuwa, Iipakethi zesosi yeSoy, Iibhiskithi zaBantwana, Ikhukhi yeLadyfinger, Intonga yeBhontshisi entsha, Umtya weHawthorn,